Avadiho ny rakitra Outlook 2003 Unicode PST ho endrika ANSI taloha - Torolàlana iray isaky ny dingana
Home Products DataNumen Outlook Repair Avadiho ny rakitra 2003-2010 Unicode PST ho endrika ANSI taloha
Avadiho ny rakitra 2003-2010 Unicode PST ho endrika ANSI taloha
Fanamarihana: tsy maintsy apetrakao ny Outlook mba hampiasa an'ity torolàlana ity.
Hatramin'ny Outlook 2003, misy endrika fisie PST vaovao natolotra izay manana tombony betsaka kokoa noho ny taloha. Ny endrika vaovao dia antsoina koa hoe endrika Unicode matetika, raha ilay endrika taloha kosa dia antsoina hoe ANSI araka izany. Ireo anarana roa ireo dia hampiasaina mandritra ity toro-lalana ity.
Na dia tsara kokoa noho ny taloha aza ny endrika vaovao, indraindray (mostly noho ny antony mifanentana) mbola mila manova ny rakitra PST ianao amin'ny endrika Unicode vaovao ho lasa endrika ANSI taloha. Ohatra, te-hamindra ny angona PST amin'ny solosaina ianao miaraka amin'ny Outlook 2003-2010 ho iray izay Outlook 97-2002 ihany no napetraka.
Microsoft dia tsy namorona fitaovana ahafahana manao fanovana toy izany. Aza matahotra anefa. DataNumen Outlook Repair afaka manampy anao amin'ity raharaha ity.
Fanamarihana: Alohan'ny hanovana rakitra Unicode PST vaovao miaraka amin'i DataNumen Outlook Repair, akatony azafady ny Microsoft Outlook sy ireo rindranasa hafa mety manova ny fisie PST.
Safidio ny rakitra Unicode PST vaovao ho rakitra PST loharano hanamboarana:
Satria ny fisie PST dia ao amin'ny endrika Outlook 2003-2010 vaovao, azafady mba farito ny endrika fisie ho "Outlook 2003-2010" ao amin'ny boaty combo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra. Raha avelanao ho "Auto Determined" ilay format, dia DataNumen Outlook Repair dia hanao scan ny rakitra PST loharano hamaritana ny endriny ho azy. Na izany aza, mila fotoana fanampiny izany ary tsy ilaina.
Rehefa te-hanova ny rakitra Unicode PST ho format ANSI isika dia tsy maintsy misafidy ny endrika fisie ilay rakitra PST niova fo ho "Outlook 97-2002" ao anaty boaty kombo eo akaikin'ny boaty fanovana rakitra voaova. Raha apetrakao amin'ny "Outlook 2003-2010" na "Auto Determined" ny format, dia DataNumen Outlook Repair mety tsy hahomby amin'ny fanodinana sy fanovana ny rakitra Unicode PST anao.
Tsindrio ny bokotra, ary DataNumen Outlook Repair start scanning sy fanovana ny rakitra Unicode PST loharano. Bara fandrosoana
Aorian'ny fizotrany, raha azo ovaina ao anaty rakitra ANSI PST vaovao ny rakitra Unicode PST, dia hahita boaty misy hafatra toy izao ianao:
Ankehitriny ny fisie PST vaovao novaina dia ao amin'ny endrika ANSI, izay azon'ny Microsoft Outlook 97-2002 hosokafana.